Safiirka UK ee Somalia oo ka hadlay in dalalka caalamka ay ka xumaadeen sida dowlada ay u… – Hagaag.com
Safiirka UK ee Somalia oo ka hadlay in dalalka caalamka ay ka xumaadeen sida dowlada ay u…
Safiirka dowladda Ingiriiska ee Soomaaliya Ben Fender OBE, ayaa ka hadlay khilaafka u dhexeeya madaxda dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada, kaasoo keenay in shir la isugu tago magaalada Garowe.
Waxaa uu sheegay in khilaafka u dhaxeeya madaxda Soomaalida ay salka ku heyso arrimo ka mid ah Dib u eegista dastuurka, Sharciga Doorashada iyo sida loo qeybsanayo Awoodda iyo Kheyraadka, wuxuuna talo ahaan u soo jeediyay inay si deg deg u heshiiyaan madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada.
“Waxaan si weyn u rajeynaa inuu jiro iskaashi dhex mara dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, inta ay jirto Xiisad la xiriirta dib u eegista Dastuurka, Sharciga doorashooyinka iyo sida loo qeybsanayo Awoodda iyo Kheyraadka, xaalku ma wanaagsanaanayo, waxaan aamin sanahay inay wacan tahay inay heshiiyaan” ayuu yiri Ben Fender oo wareysi siiyay laanta Af Soomalaga ee BBC-da.
Safiirka dowladda Ingiriiska ee Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in si dowladda Soomaaliya looga cafiyo deymaha lagu leeyahay ay waajib tahay inay la heshiiso madaxda maamul goboleedyada, taasoo qeyb ka ahaa waxyaabaha ku horgudban in deyn cafin la helo.
Waxa uu dhinaca kale sheegay in dowladda UK, Qaramada Midoobey iyo dhamaan dalalka Caalamka ay ka xumaadeen sida dowladda Soomaaliya ay u maareysay doorashadii Koonfur Galbeed iyo eryidii Nicholas Haysom, taasoo ka dhalatay dood uu ka keenay dilkii 15 qof oo aan waxba galabsan.
Ben Fender oo Muqdisho soo gaaray 22-kii February sanadkan 2019, ayaa ugu dambeyn Qaramada Midoobey ka dalbaday iney deg deg u soo magacawdo wakiilkeeda gaarka ahaa ee Soomaliya, iyadoo la marayo hanaaanka shaqaaleysiinta qofka xilkaas loo dhiibayo.
Dowladda Ingiriiska ayaa dhaqaale badan ku bixiso taageerada Soomaaliya, waxaana la sheegaa inay tahay dalka leh talooyinka iyo soo jeedinta arrimaha Soomaaliya ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey.